Kedu ihe bụ CPC? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na C	» CPC
CPC bụ okwu mkpọ okwu maka Na-eri kwa Pịa.
Nke a bụ usoro ndị mbipụta na-eji akwụ ụgwọ maka oghere mgbasa ozi na webụsaịtị. Ndị mgbasa ozi na-akwụ naanị maka mgbasa ozi mgbe ịpịrị ya, ọ bụghị maka ikpughe. Ọ nwere ike ịpụta na narị saịtị ma ọ bụ ibe, mana ọ gwụla ma emere ya, enweghị ụgwọ.